Amathuluzi okudweba wewebhu - Iseluleko se-Semalt
Isiqephu (ukukhuliswa kwe-Google Chrome)
Abahlukahlukene abangezinhlelo nabazimele abakhetha ukukhetha ama-scraper ngenxa yezici zayo ezingafani. Leli thuluzi ithuluzi lezesayensi eliqhutshwayo lingaqondisa amakhasi amabili ayisisekelo namaprosesa asezingeni eliphezulu futhi ube nobuchwepheshe obuhle bokufunda umshini ukwenza umsebenzi wakho ube lula. Le platform yenzelwe ukukhipha idatha evela ku-Amazon, eBay, nakwezinye izingosi ezifanayo futhi ine-detection yogaxekile (spam). Ngalo, ungathola kalula ugaxekile kudatha yakho futhi ungayithola isuswe kungakapheli iminithi noma amabili. Inomtapo othile we-Google API wekhasimende lesikhamera ukuze uthole idatha engcono kakhulu futhi ulondoloze imininingwane yakho ku-database yayo. Ungalondoloza futhi idatha ku-hard drive yakho noma nanoma iyiphi enye idivayisi yokuzikhethela.
Ngeniso. Io, akudingeki ube yi-technical-minded futhi ungadla idatha ephakeme kakhulu njalo. Lolu hlelo lokusebenza lwe-extraction web luthi luye lwaphazamisa isidingo sabangenalo izinhlelo kanye nososayensi bedatha. Njengoba sazi ukuthi isayensi yedatha idinga izibalo nezibalo, amakhono okuhlela, kodwa akudingeki ufunde noma ngabe usebenzisa ukungenisa. io. Leli thuluzi lifanelwe bobabili ngabanye namabhizinisi.
I-Kimono Labs yi-software evulekile yokuhlunga iwebhu evulekile. Ingafaka idatha kusuka kunani elikhulu lamasayithi kungakapheli imizuzu. Ifika kokubili izinguqulo zamahhala futhi ezikhokhelwayo futhi kufanelekile kubantu abangewona ezobuchwepheshe. Nge-Kimono Labs, akudingeki ufunde i-Python noma yimuphi omunye ulimi lohlelo. Abakwa-crawlers abakhethiwe bayakusiza ukuthi ubhale idatha yakho noma amakhasi ewebhu ahlukene. Kumele ulande futhi uqalise lolu hlelo bese uvumela i-Kimono Labs ukuthi ikufake idatha kuwe kumaminithi amaminithi. Ukuphefumula okusekelwe efwini kukuvumela ukwabelana ngolwazi phakathi kwamadivayisi ahlukene kalula futhi ngokushesha. I-Kimono Labs isetshenziselwa amabhizinisi, izintatheli, abathengisi be-intanethi, i-ejensi yokuxhumana, kanye nama-freelancers ngesilinganiso esikhulu.
I-Facebook ne-Twitter API
Idatha enkulu kuyinkinga enkulu kubaphathi bewebhu abahlukene nabangewona ezobuchwepheshe. Ngakho-ke, bavame ukusebenzisa i-Twitter ne-Facebook API ukuthola idatha yabo igxilwe. Ama-API asisiza ukuba siphume ulwazi oluwusizo kusuka kumawebhusayithi namawebhulogi ahlukahlukene, futhi senze izibikezelo mayelana nendlela yokuhlela nokugcina idatha uma isilwe ngokugcwele. Ingxenye engcono kakhulu ukuthi ama-API angangena okuqukethwe kwewebhu kalula, ngendlela efundekayo futhi engahleleki. Banikeza ukubonakala okuhle kwemininingwane ekhonjiwe, bahlukanise ngezigaba ezihlukene, noma bangenise ezifomeni ezihlukahlukene njengezifiso zethu nezidingo zethu. Kumele usebenzise ama-API e-media media uma ungumuntu ongekho kwezobuchwepheshe ongenamakhono okuhlela Source .